China Bluetooth Road-spike BT-102 fekitori uye vanotengesa | Tbit
Makaralı mugwagwa mhete BT-102
TBIT Makaralı-spike inonzwisisika terminal inoshandiswa kugovana bhasikoro kana kugovana e-bhasikoro. Iyo ine chaiyo yekumisikidza tekinoroji, kutaurirana kweBluetooth uyezve-yakagadziridzwa yemagetsi fenzi yekumisikidza tekinoroji. Inogona kushandiswa kugovera kugovana bhasikoro kana kugovana e-bhasikoro kupaka nzvimbo kuronga uye mazano kune madhipatimendi ehurumende zvichibva pane yakakura yekufamba data hombe, iyo inogona kugadzirisa matambudziko easina kukodzera GPS kumisikidza uye kupaka kusagadzikana.
-Kumaka panzvimbo dzakatarwa
- Solar kuchaja
- Saiti kuzivikanwa
- Yakareba yakareba yakamira
- OTA kusimudzira
Kureba, upamhi uye kukwirira: (107.5 ± 0.15) mm × (97.76 ± 0.15) mm × (20.7 ± 0.15) mm
Inzwa Zvinotaurwa voltage siyana Yakatsigirwa yakafara magetsi kuisa: V-3V 0.9
Yemukati bhatiri Rechargeable nickel-cadmium mabhatiri:
Kuparara kwesimba <1.5mA
Isina mvura uye isina guruva kuita IP68
Bluetooth kutepfenyura kure
Vhura nzvimbo dzemamita maviri (ingangoita 1 mita kana yakaiswa mumotokari)
Kupaka panzvimbo dzakatarwa Bluetooth Road-spike inopfuudza chiratidzo cheBluetooth, iyo e-bhasikoro inogamuchira iyo Bluetooth ruzivo rwenhepfenyuro neBluetooth Road-spike. Mushure mekutambira ruzivo rweBluetooth rweRoad-spike, iyo yakabvumidza kudzosa iyo e-bhasikoro, zvikasadaro zvinofungidzirwa kuti e-bhasikoro haibvumidzwe kudzoka kunze kwenzvimbo, iko kukanganisa kuri pasi pemamita maviri.
Solar kuchaja Tsigira kubhadharisa kwezuva, pasi pechiyero chemwenje, 2V150mA inobudirira solar panel, nekuchaja nekukurumidza.
Nzvimbo yekuzivikanwa Iyo Road-spike inotsigira inopenya mwenje mhedzisiro, iyo inogona kuzivisa saiti panguva yehusiku.iri nyore kune vashandisi kuti vawane saiti yekupaka, uye vadzime kana isiri kushandiswa.
Yakareba yakareba yakamira Mukushaikwa kwechiedza, chishandiso chinogona kushandiswa chichienderera kwemwedzi miviri. Iyo chishandiso inogona kushandiswa inoenderera kwemakore mashanu pasi pemamiriro echiedza.
Pashure: GPS Tracker Muenzaniso WD-108
Zvadaro: RFID RD-100